Kambani yeMimosa Inopa Chikamu Chayo Kuvanhu veZvishavane
Gurukota rezvechidiki nekuendesa hupfumi kuvatema, Va Saviour Kasukuwere, vanoti chirongwa chavo chiri kuenderera mberi zvekuti pari zvino vari kutaura nemakambani akaita se Murowa Diamonds, Bindura Nickel nemamwe kuti aite zvimwe chetezve
Kambani ye Mimosa Mining inonzi yapa zvikamu gumi kubva muzana zvehupfumi hwayo kuvanhu vari mudunhu re Zvishavane umo vari kushanda vachichera platinum.
Kambani iyi yakapazve mari inosvika mamiriyoni gumi yekubatsira vanhu mudunhu iri. Mimosa yava kambani yechitatu kuita izvi pasi pehurongwa hwehurumende hwekuendesa hupfumi kuvatema.
Gurukota rezvechidiki nekuendesa hupfumi kuvatema, Va Saviour Kasukuwere, vanoti chirongwa chavo chiri kuenderera mberi zvekuti pari zvino vari kutaura nemakambani akaita se Murowa Diamonds, Bindura Nickel nemamwe kuti aite zvimwe chetezve.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi uye vachishanda nesangano re Labor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Va Prosper Chitambara, vanoti havaoni vanhu mumatunhu aya vachiwana pundutso munguva pfupi iri kutevera.
Va Eric Bloch, nyanzvi munezvehupfumi vanoti nyika inoda kuti hupfumi huendeswe kuvatema kasi havawirirani nenzira yazvhiri kuitwa nazvo pari zvino.